MB 2016 Luulyo, Kaniisadda Caalamiga ah ee God Switzerland (WKG)
Mid ka mid ah filimkiisii ​​hore, John Wayne ayaa ku yidhi mid kale oo kaafiga leh, “Ma jecli inaan ka shaqeeyo bir-qorista - way i xanuunaysaa inaan joogo meeshii qaladka ahayd! in laga fikiro sida kaniisadaha u waxyeellayn karaan injiilka iyada oo loo adeegsan karo adeegsiga aan habooneyn ee farsamooyinka suuqgeynta sida kor u qaadista degdegga ah ee alaabada sumadda leh Waagii hore, aasaasayaasheena waxay raadinayeen meel iib ah oo xoog leh waxayna naga dhigeen "kaniisada kaliya ee runta ah". Qaabkan wuxuu wax u dhimayay runta kitaabiga ah maadaama injiilka dib loo sharxay si kor loogu qaado magaca sumadda.
Ku lug yeeshay shaqadii Ciise ee faafinta injiilkiisa
U yeedhitaankeenna Masiixiyiintu maahan inay suuq geyno wax soo saar la sumeeyay, laakiin inaan kaqaybqaadanno shaqada Ciise iyadoo la kaashanayo Ruuxa Quduuska ah iyo in injiilka lagu faafiyo Kaniisadda adduunka oo dhan. Injiilka Ciise wuxuu ka hadlayaa dhowr arimood: Sida cafiska iyo dib-u-heshiisiinta loogu dhammeeyey allabarigii dib-u-heshiisiinta ee Ciise; sida Ruuxa Quduuska ahi noo cusbooneysiinayo (iyo micnaha ay tahay inaan nolol cusub ku noolaano); nooca wicitaankeenna sidii annagoo raacayayaal Ciise ah oo ku biiraya hawshiisa adduunka oo dhan; iyo rajo hubaal ah oo ah inaan abid ka tirsanaan doonno bulshada uu Ciise la leeyahay aabaha iyo Ruuxa Quduuska ah.
Waxaa jira meelo la adeegsado, in kasta oo xaddidan, oo suuqgeynta (oo ay kujirto sumadaynta) ay waxtar u leedahay fulinta adeegga injiilka ee Ciise noogu yeedhay. Tusaale ahaan, waxaan adeegsan karnaa astaamaha, boggaga internetka, warbaahinta bulshada, xaashiyaha, joornaalada, astaamaha, joornaalada iyo qaabab kale oo isgaarsiineed oo naga caawiya fidinta farriinta Ciise iyo kicinta iimaanka dadka. Si kasta ha noqotee, qaababka noocan ahi waa inay noqdaan kuwo waxtar leh oo waa inaysan naga hor joogsan inaynaan iftiin iyo cusbo u lahayn bulshooyinka muwaaddiniintayada. Sidaan ayaan u arkaa, Kama soo horjeedno suuqgeynta sida saxda ah loo dalbaday, laakiin waxaan sidoo kale jeclaan lahaa inaan sameeyo rafcaan ku saabsan taxaddar oo aan arrintan ku xiro aragti.
Rafcaan ka qaadashada digniinta
Marka loo eego qeexidda George Barna, suuq-geynta ayaa ah “erey wadareed oo ka kooban dhammaan howlaha u horseedaya labada dhinac inay ku heshiiyaan inay badelaan badeecadaha qiimahoodu ku filan yahay” (Tallaabada Tilmaanta Tallaabada ee Suuqgeynta Kaniisadda; dt: hordhac tallaabo tallaabo ah galaysad kaniisad). Barna ayaa kordhisay muddada suuqgeynta iyada oo ku dartay waxqabadyada ay ka mid yihiin xayeysiinta, xiriirka dadweynaha, qorshe istiraatiijiyadeed, sahaminta macaamiisha, kanaalka qaybinta, lacag uruurinta, qiimeynta, aragtida iyo adeegga macaamiisha inay yihiin waxyaabaha suuq geynta. Markaa Barna wuxuu ku soo gabagabeeyey: "Haddii qodobbadan ay isugu yimaadaan macaamil ganacsi oo keenaya in dhinacyada ku lugta leh inay is weydaarsadaan alaabada qiimahoodu ku filan yahay, wareegga suuq-geynta ayaa xiran." Aynu xasuusano in yar fikirka ah isweydaarsiga alaabooyin qiimahoodu ku filan yahay.
Dhawr sano ka hor ayay ahayd markii qaar ka mid ah wadaaddeenna ay barteen buug caan ah oo ka yimid hoggaamiye kaniisad ku taal koonfurta California. Farriinta ugu weyn ee buugga ayaa ahayd in haddii aad suuq u samaysatid kaniisaddaada hab gaar ah, waxaad dadka iyo jaaliyaddooda u soo bandhigi kartaa wax ay si xamaasad leh ku aqbalaan. Qaar ka mid ah wadaaddadayada ayaa tijaabiyey farsamooyinka suuq geynta ee lagu taliyay wayna ka xumaadeen maxaa yeelay tirada xubnahoodu ma aysan kobcin.
Laakiin miyaynu suuqgaynaynaa injiilka (iyo kaniisadahayaga) sida Walmart iyo Sears u suuqgeeyaan badeecadooda - ama xitaa u adeegsano qaabab suuq geyn ah oo kaniisadaha qaarkood u isticmaalaan inay ku soo saaraan koror tiro? Waxaan u maleynayaa inaan ku raacsanahay inaysan ahayn inaan ku ammaano injiilka sida shey macaamiil qiimo weyn leh. Taasi dhab ahaan maahan wuxuu Ciise maskaxda ku hayey markii uu na siiyay shaqada ah inaan injiilka ku wacdinno adduunka oo aan ka dhigno dadka dhammaan qaybaha nolosha oo dhan.
Siduu rasuul Bawlos qoray, injiilka waxaa badanaa lagu muujiyaa dadka cilmiyanka ah inay yihiin falcelin ama doqonimo (1 Korintos 1,18: 23-8,4) runtiina ma ahan wax soo jiidasho leh oo aad loo raadsaday. Annaga oo ah kuwa raacaya Ciise, innagu ma nihin kuwa jidhka, laakiin waxaan ruux ahaan xagga ruuxa u nahay (Rooma 5: XNUMX-XNUMX). Runtii innagu kaamil kuma lihin, laakiin Ruuxa Quduuska ah ayaa innagu ku habboonaan doonista Ilaah (iyo sidoo kale shaqadiisa). Marka si la fahmo, maahan wax la yaab leh in Bawlos diiday farsamooyinka “aadanaha” (cilmaani ah) ee faafinta injiilka:
Tan iyo markii Ilaah nagu aaminay hawshan nimcadiisa, qalbi jabi mayno. Waan diidanahay dhammaan hababka aan wanaagsanayn ee wacdinta. Annagu iskudayeyn mayno inaan qof marin-habaabno oo ma been sheegayno Ereyga Eebbe, runtii waxaan ku hadlaynaa Ilaah hortiisa. Qof kasta oo qalbigiisu xaq yahay waa ogyahay tan (2 Korintos 4,1: 2-XNUMX; nolosha cusub). Bawlos wuxuu diiday inuu isticmaalo habab horseed u ah guusha muddada gaaban laakiin ku khasaaray injiilka. Nooca kaliya ee guusha ee uu doonayay ee nolosha iyo wasaaradda ayaa la sheegay inuu ku xidhan yahay Masiixa iyo Injiilka.
Balanqaadyada qaarkood ee ay sameeyaan kaniisadaha ee xayeysiiska injiilka u dhigaya sida cuntada loogu talagalay guusha ayaa u eg sidan: “Kaalay kaniisaddayada dhibaatooyinkaagana waa la xallin doonaa. Waxaad kuhelaysaa caafimaad iyo barwaaqo. Aad baa kuu barakaysan doona ”. Barakooyinka loo yaboohay sida caadiga ah waxay kuxiran yihiin awood, guul, iyo rayn rayn. Saamaynta sonkorta iyo xargaha ayaa la dejiyaa marka la soo bandhigo dadka xiiseynaya shuruudaha lagama maarmaanka ah - marka ay timaaddo waxyaabo ay ka mid yihiin caqiidooyin sare, ka qayb qaadashada koox yar, bixinta tobnaad, ka qaybgal firfircoon wasaarad , ama u hogaansanaanta waqtiyada qaarkood salaadda iyo daraasadda Baybalka. In kasta oo kuwani ay waxtar u leeyihiin koritaanka raacitaanka Ciise, midkoodna ma sameyn karo wax kasta oo Ilaah ku samayn karo inuu si wanaag ah u buuxiyo damacyadeena xagga beddelaadda waxyaabaha uu filayo inuu inaga filanayo.
Xayeysiinta aan sharciga ahayn iyo suuq geynta khiyaanada ah
Dadka oo ay ku raacaan hadalo sheegaya inay u imaan karaan Eebbe si ay u fuliyaan waxay rabaan waa xayeysiis aan xaq ahayn iyo suuq geyn khiyaali ah. Ma ahan wax ka badan jaahilnimada khayaanada casriga ah. Masiixu uma uusan dhiman si uu u fuliyo damacyadeena macmiilka. Uma uusan imaan inuu noo dammaanad qaado caafimaad iyo barwaaqo. Taa bedelkeed, wuxuu u yimid inuu nagala shaqeeyo xiriirka wanaagsan ee Aabbaha, Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah iyo inuu ina siiyo nabad, farxad iyo rajo, kuwaas oo ah midhihii xiriirkan. Tani waxay ina xoojineysaa jacaylka qaaliga ah ee Ilaah ee beddelaya jacaylka iyo caawinta dadka kale. Jacaylka noocan ah ayaa loo arki karaa qaar (iyo laga yaabee badan) mid galmo leh ama meel ka dhac ah, laakiin sidoo kale waxay markasta farta ku fiiqaysaa ilaha badbaadintan, dib u heshiisiinta iyo isbedelka jacaylka.
Miyaan u iibinaynaa injiilka sidii shay isweydaarsiga qiima ku filan oo u dhexeeya labada qaybood ee lagu heshiiyay? Xaqiiqdii maya! Injiilku waa hadiyad qofwalbaa u leh nimcada Ilaah. Waxa kaliya oo aan sameyn karnaa waa inaan aqbalno hadiyadda gacmo madhan, gacmo furan - oo ay ka buuxaan aqbalaad mahadnaq leh ee ducooyinka loo haysto xagga Ilaah. Bulshadii nimco iyo jacaylba waxay isku muujiyaan nolol cibaado mahadsanid - jawaab ay ka go'day Ruuxa Quduuska ah oo indhahayaga furay oo qaatay hamigeenna iyo kibirkayaga madaxbannaanida ee ku noolaanshaha ammaanta Ilaah.
Isweydaarsi cajiib ah
Aniga oo maskaxda ku haysta fikradahan, waxaan jeclaan lahaa inaan tilmaamo in nolosheena gudaheena iyo Masiixa iyo iyada oo loo marayo Ruuxa Quduuska ah, isdhaafsiga nooc gaar ah, isdhaafsiga runtii cajiib ah. Fadlan aqri waxa Bawlos qoray:
Waxaa iskutallaabta laygula qodbay Masiixa. Waan noolahay, laakiin imika ma ihi, laakiin Masiix ayaa igu dhex jira. Maxaa yeelay, waxaan haatan jidhka ku noolahay, waxaan ku noolahay iimaan ee Wiilka Ilaah, kan i jeclaaday oo naftiisa isu bixiyey (Galatiya 2,19b-20 LUT).
Waxaan ku wareejinay nolosheena dembiga ah Ciise wuxuuna na siinayaa noloshiisa xaqnimada. Haddii aan nafteenna tanaasulno, waxaynu helnaa noloshiisa oo innaga dhex shaqeysa. Haddii aan nolosheena ku hoos galno xukunka Masiixa, waxaan heli doonnaa macnaha dhabta ah ee nolosheena, ma aha inaan ku noolaano himilooyinkeena, laakiin inaan kor u qaadno sharafta Eebbe, Abuurahayaga iyo Bixiyahayaga. Isweydaarsigaani ma ahan hab suuq geyn - waxaa lagu sameeyaa nimco. Waxaan helnaa wehelnimo buuxda oo ay la yeeshaan Ilaaha ah Aabbaha, Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah, oo Ilaah wuxuu inaga aqbalaa jidhka iyo nafta. Waxaan helnaa dabeecadda Masiix ee saxda ah wuuna inaga qaadaa dembiyadeenna oo dhan wuxuuna ina siiyaa cafis buuxa. Tani dhab ahaan maahan isweydaarsiga badeecado qiimahoodu ku filan yahay!
Masiixi kasta oo Masiixa rumaystaa, lab ama dhadig, waa abuur cusub - ilmo Ilaah. Ruuxa Quduuska ahi wuxuu ina siinayaa nolol cusub - nolosha Eebbe inagu dhex jira. Sida abuur cusub, Ruuxa Quduuska ahi wuxuu ina beddelaa si aan u noqonno kuwo aan ku sii lug lahaanno jacaylka Masiixa ee kaamilka ah ee Ilaah iyo dadka. Haddii noloshu Masiixa ku jirto, markaa annaguna qayb ayaan ku leenahay noloshiisa farxadda iyo jacaylka samirkaba. Waxaan qayb ka nahay silica uu ka qabo silica, dhimashadiisa, xaqnimadiisa, sarakiciddiisa, kor u qaadkiisa iyo ugu dambeyntiintiisa. Annagoo ah carruurta Ilaah, waxaynu nahay kuwo wax la dhaxla kuwa Masiix la midka ah, ee lagu soo daray cilaaqaadka saxda ah ee uu la leeyahay Aabbihiis. Marka tan la eego, waannu ku barakaysan nahay wax kasta oo uu Masiixu inoo sameeyey si aan u noqonno carruurtii Ilaah jecel, oo aan isaga kula midoobi jirno - had iyo goor ammaanta!
Farxad buuxda ka buuxsaday isweydaarsiga cajiibka ah,